भारत र चीनलाई जुधाएर अमेरिकाले लिँदैछ फाइदा
भारतको पूर्वी लद्दाखमा गत मे महिनादेखि भारत र चीनका सैनिकहरू आमनेसामनेको स्थितिमा छन् ।
भारतको परराष्ट्रनीति विश्लेषक अमृता ढिल्लोंले यो विवाद लम्बिँदै जानुको कारण तथा यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ भनी व्याख्या गरेकी छन् ।
एसियाका यी दुई ठूला देशबीच तनाव बढ्नुमा विभिन्न कारक तत्त्व छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘भारत–चीन सीमा विवाद पूर्वी लद्दाखमा किन हुन्छ ? किन उत्तरपूर्वी भारतमा हुँदैन जहाँ चिनियाँहरूसँग विभिन्न ठाउँमा सीमाविवाद छन् र उनीहरू भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई चिन्दैनन् ?’
‘उत्तर हो, पांगोङ तालको ६० प्रतिशत भाग तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा पर्छ । हामीले चीनको चिन्ता यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तिब्बतलाई सिनजियाङसँग जोड्ने सडक जी–२१९ छ र त्यो पांगोङबाट जम्मा १०० किलोमिटर पर छ ।’
मानौं युद्ध भएछ भने नयाँ दिल्लीले जी–२१९ लाई तारो बनाएर तिब्बत र सिनजियाङलाई विच्छेद गराई तुलनात्मक फाइदा दिलाउने ढिल्लों बताउँछिन् । त्यसैले यो स्थानलाई चिनियाँहरूले सम्भावित जोखिमको क्षेत्र मान्ने गरेका छन् ।
दोस्रो कारण भनेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर हो जुन पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गिट बाल्तिस्तान भएर जान्छ ।
‘एकातिर बेइजिङले भारतको आफ्नै भूभागमा भइरहेको निर्माण र लगानीको विरोध गर्छ भने अर्कातिर चीनले भारतको कट्टर विरोधी पाकिस्तानसँग हात मिलाउँछ र भारतसँग सल्लाह नगरी गिल्गिट बाल्तिस्तानलाई व्यापारका लागि पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग गर्छ,’ ढिल्लों भन्छिन् ।
तेस्रो, चीनलाई पेटी सडक पहल सफल बनाउनका लागि हिन्द महासागर हुँदै रणनीतिक सामुद्रिक मार्गमा बाधारहित पहुँच चाहिएको छ । यसका लागि चीनले भारतसँग सुसम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ किनकि भारतले हिन्द महासागर र त्यहाँका प्रमुख स्थानलाई नियन्त्रण गर्छ ।
एसियाका यी दुई विशाल देशले हल गर्नुपर्ने अनेकौं विषय छन् तर हालै सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठक सफल रहेको अनि पाँच बुँदे सहमति गरिएकोमा रुसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको ढिंल्लोको कथन छ ।
‘भारत र रुस परम्परागत साझेदार हुन् र एकअर्काका विश्वास गर्छन्,’ उनले भनिन् । ‘यो त्रिपक्षीय बैठकले पूर्वी लद्दाखमा समाधान ल्याउने काम नगर्ला तर रुसले एसियामा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
चीन र भारतबीचको द्वन्द्व वाशिङटनको हितमा रहेको ढिल्लोंको तर्क छ । यसका लागि उनले निम्नबमोजिम कारण दिएकी छन् ः
पहिलो, यसले अमेरिकालाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको नीति अवलम्बन गर्न सहायता गरेको छ । त्यसअन्तर्गत ऊ चीन र उत्तर कोरियामाथि दबाब दिन चाहन्छ ।
दोस्रो, यसले गर्दा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा धेरै सैन्य स्रोत उपयोग नगरिकनै चीनमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ । अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक र्‍यान्डले क्वाडलाई खुला रूपमा चीनविरोधी साझेदारी बनाउनका लागि अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको अनुमान गरेको छ । भारतलाई क्वाडको महत्त्वपूर्ण साझेदार अमेरिकाले मानेको छ ।
वाशिङटन बाहेक पाकिस्तानलाई पनि भारत र चीनबीचको शत्रुताले फाइदा पुर्‍याउनेछ । भारत र चीन आमनेसामने हुँदा पाकिस्तानले युद्धविराम उल्लंघनको कीर्तिमान तोडेको छ । बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको गतिरोध कायम रहिरहेमा इस्लामाबादले कश्मीरमा आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउनेछ । तर यो त्यति यथार्थवादी परिदृश्य नभएको ढिल्लोंको मत छ ।
यस संकटलाई समाधान गर्ने कुनै अर्को विकल्प भारत र चीनसँग छ त ? दुवै विकासशील अर्थतन्त्र हुन् । तर चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा चार गुणा बढी छ । दुवै देशको सीमाविवाद कायम छ र यसलाई समाधान गर्नमा नै उनीहरूले जोड दिनुपर्छ ।’
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको कोरोना खोप लगाएका ...